Jiro jiro ho an'ny fahitalavitra anao na monitor miaraka amin'ny LED CRI 6500K Ultra-High - Jiro biol MediaLight
Mitahiry hatramin'ny $10.00 Save $0.00
Vidiny ankehitriny $14.95
Ianao dia nitady jiro tsy mitongilana tsy manimba banky. Mampahafantatra LX1 avy amin'ireo mpanamboatra The MediaLight. Fantatray fa mahasosotra azy izany ...
Mitahiry hatramin'ny $0.00 Save $0.00
MediaLight Mk2 Flex CRI 98 6500K Jiro Bias fotsy
Vidiny tany am-boalohany $59.95 - Vidiny tany am-boalohany $108.90
Vidiny ankehitriny $59.95
Ny andiana MediaLight Mk2: jiro optimum ho an'ny tontolo iainana horonantsary manakiana be dia be ve ianao nijery ny fahitalavitra tamin'ny fiainanao manontolo? Miaraka amin'ny ...
MediaLight Mk2 Eclipse 1 Meter (Ho an'ny fampisehoana solosaina)
Vidiny tany am-boalohany $32.95 - Vidiny tany am-boalohany $42.90
Vidiny ankehitriny $32.95
Andininy momba ny vokatra The MediaLight Mk2 Series: Jiro optimum ho an'ny tontolo iainana horonantsary manakiana be dia be fa tsy ny fahazoana izany tonga lafatra fotsiny ...
Ny MediaLight Bulb dia natao hifanaraka amin'ny SMPTE Standard ST 2080-3: 2017 'Reference Views tontolo iainana ho an'ny HDTV Evaluation Images.'Featuring t ...
Maimaimpoana ity vokatra ity raha ampiana amin'ny kaomandin'ny jiro bias (ampio ny hazavanao mitongilana amin'ny harona fiantsenana ary ho hitanao ny safidy hanampy azy io maimaim-poana ...
Fandefasana USA maimaim-poana
ho an'ny zavatra rehetra amidinay!
Fanaterana an'izao tontolo izao
ao anatin'ny 2-6 andro monja
& 2-taona ho an'ny LX1
9 am-4 hariva Atsinanana Mon-Zoma
Ny SystemLight Mk2 Bias Lighting System dia zava-mahadomelina amin'ny jiro mihintsy momba ny teatra an-trano sy matihanina izay tena hahatonga ny fahitalavitrao hijery tsara kokoa nefa tsy manimba ny maha-marina ny sary. Ankehitriny, tsy ny fieboeboana fotsiny izany - ny fenitry ny indostria. Jereo ny antony nahazoan'ny The MediaLight mari-pahaizana AVForum's Choice's Choice Award ary isa 10 avy amin'ny 10 isa!
Jereo bebe kokoa, jereo tsara
Jiro Biolo MediaLight Mk2 Series Bias, jiro sy jiro birao, samy manana ny puzzles D65 ColorGrade Mk2 namboarina mitovy.
Araraoty tsara ny sinema an-tranonao miaraka amin'ny Spear & Munsil UHD HDR Benchmark UHD Blu-ray Disc.
Ny sanda tsara indrindra amin'ny jiro bias ISF voamarina
LX1 6500K Bias Lights no safidy mety indrindra amin'ny fampifangaroana ny fahitsiana sy ny fahaiza-mividy. Ireo jiro bias ISF-voamarina dia manomboka amin'ny vidiny ambany $ 14.95 (miaraka amin'ny fandefasana Fedex USA 2-andro maimaim-poana!) Ka tsy mahagaga raha mivarotra haingana izy ireo!
Mampahafantatra ny Ideal-Lume Pro avy amin'i MediaLight Desk Lamp ho an'ireo mpandoko loko. Jiro voafehy ho an'ny fifehezana anao, ary tsy misy toerana tsy tianao izany.
Jereo izay lazain'ny hevitra
"Tsara kokoa ny asany [MediaLight] noho izay atolotry ny fifaninanana amin'izao fotoana izao."
"Amin'ny farany, ny MediaLight Mk2 Flex no mety ho fanavaozana tsotra indrindra, mora indrindra ary tsara indrindra azonao atao amin'ny fananganana sinema ao an-tranonao."
"Raha tsorina, ny MediaLight Mk2 Flex manao ny asany mifanaraka amin'izay voalaza ao. Norefesiko ny fampisehoana tamin'ny CalMAN sy ny spectrométer i1Pro2, ary nety teo amin'ny teboka fotsy D65 ary nanana ny valin'ny spektraly lehibe indrindra an'ny izay hazavana efa norefesiko hatramin'izao."
Chris Heinonen, Theater ho an'ny trano
Ny rafi-pandrefesana Medialight Flex Mk2 Bias (no) vola mora indrindra $ 60 ka hatramin'ny $ 100 azoko atolotra anao handany ny teatra an-tranonao, indrindra raha nanokana fotoana handefasana ny seho ianao. Tena soso-kevitra!
Indiana Lang, Tsiambaratelo momba ny teatra an-trano & Fidelity avo
Ahoana ny fomba fananganana jiro bias amin'ny fomba mety
Septambra 8, 2021 Jason Rosenfeld
Ho hitanao fa tsy mivarotra MediaLight amin'ny Amazon.com izahay. Izahay manokana dia mividy vokatra marobe amin'ny Amazon, toy ny cartridges sy boky fanonta, fa ny zavatra maro izay miasa amin'ny vokatra entam-barotra dia tsy mifanaraka amin'ny vokatra akany ...
Septambra 1, 2021 Jason Rosenfeld
MediaLight sy LX1 Bias Lights dia tohanan'ny adiresy 3M VHB (Very High Bond). Lakaoly matanjaka ity ary nataonay niverina ny adhesive 3M tamin'ny volana Aogositra 2017, rehefa nanomboka nianjera tamin'ny LG vaovao farany ...
Jolay 13, 2021 Jason Rosenfeld
Miresaka momba ny jiro fitongilanana ao amin'ny fantsona Murideo
Ny filoha MediaLight sy ny tale jeneraly, Jason Rosenfeld dia miara-mipetraka amin'i Jason Dustal avy any Murideo mba hiresaka momba ny fanahafana ny fitongilanana D65 namboarina sy ny anjara toerany ao amin'ny teatra an-trano voatsara.
Ny fenitra indostrialy amin'ny jiro fitongilanana
Ny hazavana, jiro na luminaire dia manazava ny hazavana, ny jiro na ny luminaire rehetra an'ny MediaLight sy LX1, izay namboarina mba hahitsy mandritra ny androm-piainan'ny vokatra. Ireo mpandoko loko, calibrator, tia sinema an-trano, mpaka sary, fotodrafitrasa aorian'ny famokarana, ary ireo matihanina amin'ny sary amin'ny sehatry ny fitsaboana manerantany dia mampitovy ny marika MediaLight miaraka amin'ny kalitao sy ny fahaiza-manao.
Isaky ny vokatra MediaLight, avy amin'ny $ 32 MediaLight Eclipse ho an'ny solosaina mankany amin'ny MediaLight Pro dia voamarina ISF ho marim-pototra ny mari-pahaizana momba ny mari-pana amin'ny loko D65 sy ny mari-pahaizana fandikana loko (CRI)
Ny singa rehetra ao amin'ny rafitry ny jiro fanaovan-gazety MediaLight dia rakotra mandritra ny 5 taona hatramin'ny datin'ny fividianana noho ny antony rehetra eritreretina. Tsy voafetra ho an'ny kileman'ireo mpanamboatra izany. Izy io koa dia manarona goof-ups, fahasimbana tsy nahy ary halatra
Marina tsy misy dikany. Maloto mora vidy.
"Ny tsiambaratelon'ny teatra an-trano sy ny Fidelity avo dia milaza fa sarotra ny maka sary an-tsaina ny fahitalavitra OLED iray izay mihalehibe kokoa noho ny hafa sy ny mampifanohitra azy fa ny maivana mitongilana dia nisy vokany. . . Manatsara ny traikefa hijerena miaraka amin'ny kalitaon'ny sary mihamitombo sy ny havizanan'ny maso ambany; fandresena izany. Raha ny sioka hatrany dia tsy lasa tsara lavitra noho io. Ny Kitaran-jiro Scenic Labs LX1 Bias dia mahazo ny fahazoako torohevitra avo indrindra. "
Nanazava ny tombotsoan'ny jiron'ny fitongilanana D65 namboarina avy amin'ny MediaLight ilay mpandoko loko matihanina Ollie Kenchington
Jiro tsy mety = sary tsy marina
Nohamafisinao tsara ny fampisehoana nataonao, koa nahoana ianao no "tsy manadanja" azy amin'ny jiro tsy marina?
Ny MediaLight dia novolavolain'i Scenic Labs, mpanonta ny Spears & Munsil Benchmark. Hitanay fa tsy misy olona manao hazavana mitanila izay mendrika ary manome ny CRI avo lenta sy ny mari-pana (maripana miloko mifandraika) izay ilain'ny mpandoko loko matihanina sy ny fialamboly sarimihetsika an-trano.
Miezaha ho matotra amin'ny jiro bias
Izay rehetra ilainao dia ao anaty boaty
Zava-dehibe taminay ny nanao ny The MediaLight ho marina araka izay azo atao ho an'ireo matihanina nefa mora ho an'ny mpanjifa ao an-trano ihany ny mametraka amin'ny fahitalavitra.
Tsy mila fitaovana ianao. Tsy misy azo apetaka, tsy misy tariby tapaka, ary tsy misy zavatra vidina intsony. (Misy dimmer WiFiHH WiFi tsy voatery atao, fa tsy voatery hampiasa MediaLight).
● Tora-pahazavana CRI avo sy avo-CRI (≥98-99 Ra, arakaraka ny maodely)
● USB AC Adapter (miala amin'ny seranan-tsambo USB amin'ny fampisehoana na fahitalavitra anao). Eclipse dia misy extension USB 4ft
● 5V infrared PWM dimmer, mifanaraka amin'ny mpanara-maso lavitra manerantany, tetezana IR ary blasters
● Fanaraha-maso lavitra Infrared (mifanaraka amin'ny remote universal toy ny Harmony) ho an'ny rehetra fa ny maodelin'ny solo-sain'ireo Mk2 Eclipse, izay misy dimmer milahatra
Fanamarihana farany momba ny MediaLight Bias Lighting
Mpanjifa marobe no nidera anay amin'ny hatsaran'ny efitranonay, ary ny MediaLight dia ampahany lehibe amin'izany.
Vokatra avo lenta. Niavaka ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Noho ny haben'ny fahitalavitra dia voatery niandry ny zanako 2 lahy hody aho tamin'ny Paska mba hisintona ny fahitalavitra tamin'ny rindrina ary hampandry azy eo am-pandriana. Rehefa nanana fanontaniana aho dia nanampy ahy ny fanampiana MediaLight Paska hamita azy. Mora ny fametrahana. Nomena sakafo avy amin'ny seranan-tsambo USB ny jiro. Ny jiro dia mirehitra sy maty miaraka amin'ny fahitalavitra sy ny famonoana azy. Fijery tsara.
Ny zava-drehetra momba ny vokatra Medialight dia malaza. Manana vokatra tsara izy ireo, izay mahatsapa kalitao avo lenta, tsara ny maripanan'ny hazavana, tsara ny tariby sy ny switch, ary miasa tsara ny lavitra mba hampifanarahana tsara ny famirapiratana. Tsy hividy jiro bias hafa aho amin'ny rindrambaiko rehetra.
Midira ho an'ny fanavaozam-baovao MediaLight sy LX1 anay
Mbola tsy nandefa mailaka isika, fa tsy midika izany fa tsy handefa izany!